Iingcebiso ngezempilo - Bezzia | IBezzia
Njengoko besesitshilo, impilo kukungabikho kwezifo kunye nokufumana imeko efanelekileyo yezentlalo, ezengqondo nezomzimba. Kungenxa yoko le nto sivela eBezzia, sifuna ukukunika iingcebiso ngezempilo ukufezekisa ezi njongo kwaye uzame ukumakisha amanyathelo okukubonisa indlela.
Ukongeza kulwazi malunga nokutya, iziphumo ezinobungozi zeziganeko ezithile okanye indlela yokuziqhelanisa nemidlalo ngokufanelekileyo, siza kugxila ekunikezeleni isikhokelo sokutshintsha izimo zengqondo kunye nokwamkela imikhwa esempilweni.
Kweli candelo ku iingcebiso zempilo Siyathemba ukukunika isikhokelo sokuzikhathalela kwaye uzigcine ukwimeko entle.
Ukutya kubalulekile kumzimba womntu, leyo yinto esinobungqina benzululwazi ngayo. I…
Iivithamini kunye neeminerali ezikhuthaza inkumbulo kunye nokugxila
Ukutya kuqulethe izondlo ezifunwa ngumzimba ukuze wenze imisebenzi yawo ngokufanelekileyo. Ingqondo, umzekelo, idinga iiminerali ezithile ...
Yintoni eyenziwa kuqala, ukuxukuxa amazinyo okanye ukuvungula?
Zombini ibhrashi yamazinyo kunye neflossing yamazinyo zibalulekile ukulandela ucoceko lomlomo olululo. Ikwabalulekile...
I-Cinnamon, i-superfood enezibonelelo ezininzi zempilo
I-Cinnamon yi-spice engasweli kuyo nayiphi na ikhitshi, ukutya okunika i-flavour engaqondakaliyo. Kwaye malunga…
Izidlo ezi-5 ezinceda ukuthintela izifo
Oko kutya kuchaphazela impilo ngokuthe ngqo yinto eyaziwayo. Ngapha koko, intetho ithi "si...
Ngaba awuboni kakuhle? Aba ngoonobangela abanokubakho
por UToñy Torres yenzayo Iiveki ze4 .
Ukuba nombono olumfiliba sisithintelo xa kufikwa ekwenzeni imisebenzi elula njengokuhamba ngokukhuselekileyo esitratweni….
Eyona mithambo ilungileyo yokuvuselela inkumbulo
Ngaba uyafuna ukuphucula kunye nokuvuselela inkumbulo? Emva koko siphakamisa uluhlu lweendlela zokuzivocavoca, ezinokuthi zingabi njalo. Kodwa…
Indlala, ixhala, okanye ukukruquka? Amaqhinga okuzahlula
Ukutya sisenzo esisisiseko ebantwini, ke ngoko ukuziva ulambile imini yonke ...
Ziphephe iingxaki zombono ngelixa usebenza ngocingo
Iingxaki zombono zixhaphake kakhulu xa unxibelelana ngomnxeba. Ke kufuneka sizame ukusebenzisa uluhlu lweengcebiso, ...
por UToñy Torres yenzayo Iinyanga ze2 .
Kuninzi okuthethwa malunga nomgangatho we-pelvic xa kuziwa kubafazi abangoomama, kodwa kuncinci ekuthethwa ngako malunga ...
Ngokuqinisekileyo ngaphezulu kwesihlandlo esinye ukhe weva ngeentyatyambo zamathumbu kwaye kubaluleke kangakanani ukukhusela ...